Wonke umuntu okungenani kanye kodwa wayizwa inkulumo ethi "ngamandla omoya." Kusho ukuthini? Kungani abanye babe it, abanye bengazi, futhi kanjani ukuthola ukuthi iyatholakala ngamunye ngokukhethekile? Kungenzeka yini ukuba ukuthuthukiswa yayo, futhi kungakanani idinga ukwenza umzamo?
Amandla kwengqondo kubaluleke kakhulu kuleli zwe lanamuhla. Kuyinto ngenxa yokubakhona yalo, umuntu uphendulela ukuba inqobe zonke kwezimo zokuphila ezinzima ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi nobunzima ngobuningi, kudlule izithiyo ukuthi ihlangabezane endleleni, futhi siphile nje. Kuyinto ukuphila, hhayi ukuba sibe khona, njengoba abantu abaningi abahlala ngokugcwele, ngokujabulisayo, ngenhlonipho.
Abantu abaningi bayazibuza kanjani ukuthuthukisa amandla kwengqondo, kodwa nakhu Kuyaphawuleka ukuthi lokhu akulula njalo. Kwasithatha isonto lonke ukukwenza kungasebenzi, kungathatha izinyanga noma ngisho neminyaka ukuqeqeshwa kanzima, ne onhlobonhlobo: kusukela ukulolonga umzimba ukuze ezingokwengqondo zokuziphatha.
Yiqiniso, kunzima ukucabanga yokukhuluma abstract ngaphandle imininingwane. Kuze kube yimanje, izibonelo ezilandelayo amandla ezaboniswa abantu ezimweni ezibucayi.
Umkhumbi, isiphepho, amatshe. Ithimba esinabantu abayishumi, liye lasinda eyodwa kuphela nsizwa. It waya ogwini encane esiqhingini lingenamuntu phakathi lolwandle olukhulu okunosawoti, ngakho lalizobhujiswa ekufeni eside ubuhlungu (ngokungafani kuya ozakwabo zakhe owafa ngokushesha futhi cishe kobuhlungu).
Yini umuntu kulesi simo? Othile, isibonelo, kungaba ukulinda usizo, lizotholakala ukufika ngokushesha wothile onombono "izwekazi" futhi ngeke wenze imizamo yokuthola amathuluzi adingekayo ukuze ikwazi ukuziphilisa. Kodwa akuyena umuntu wethu. Waqala ukucabanga, yini okufanele uyenze futhi kanjani ukuze basindiswe. Ngenxa amandla eziphambili umoya isimo sakhe awazange ayiphule, ngakho esikhundleni iconsi futhi ehlezi eyihlane lolwandle indoda baya maphakathi nezwe, ehlathini ukuthola ukudla neziphuzo. ngokushesha Wathola ukusakaza kanye waterfall encane ngamanzi ahlanzekile, kanye nezithelo. Ngosuku lokuqala drawled.
Kwaphela inyanga. Phakathi nalesi sikhathi, abantu abaningi baye bakwemukele isimo. Abantu bethu siqu asheshe afunda ukuthi wenze umlilo, kodwa ngoba nsuku zonke maqondana kusihlwa ovuthayo emlilweni. Lapho sekuqala ukuhwalala, Wabaqhamisa kakhulu ubukhulu umlilo, ukuze zidonse ukunaka kwanoma abasindisi ezingaba khona. Wafunda ukuze azingele usethe izikhali esikhashana futhi wakha indlu. Akazange anqotshwe futhi baqhubeka ukwenza futhi sethemba the best, futhi ngolunye usuku amathemba akhe ashabalala. Le ndoda ngasinda sibonga isibindi core kwangaphakathi, amandla omoya.
Enye inguqulo encane, othathwe ifilimu: intombazane wangena yezinyoni kuya man. Wayengahlezi uzokubulala wakhe, kodwa wayazi kwaba isikhathi, futhi ngolunye usuku kuzophela. Cell eziqinile, phumani ngeke kwenzeke. Nsuku zonke, yena buthule uzamile ukudonsa a Amahlumela kancane nimkhiphela phakathi nail. Washaya sengathi ukuba intombazane enhle, ngakho njengoba ukungabacasuli le Maniac, kodwa wayengazi ukuthi iyini imibono Sihlala engqondweni yakhe eyisithunjwa. Ngolunye usuku, njengoba cishe kakade ukuyichaza, intombazane waphendukela uthole nail. Elikhulu, abukhali. Yena wabhokoda ngqo emzimbeni villain. Ngenxa yalokho, i-intombazane ingafi, ukuthatha ukhiye emangqamuzaneni.
Ngo horror amafilimu kanye okuvusa usinga, ngasendleleni, ngokuvamile ungakwazi ngokuvamile ukubona abalingiswa, ogama amandla yinhlonipho nokudumisa.
Lezi zibonelo kumele kuphetfwe mayelana lokuthi amandla anjalo. Lokhu ukuntula ukwesaba, futhi khona ukuzimisela ukuphikelela nokuthembela isibindi. Lokhu kuyikhono akukuniki kunoma imaphi, ngisho nasezimweni ezinzima kakhulu abonakala ezingenathemba. Kuyinto isifiso angenakuvinjwa ukunqoba, okuyinto zingephulwa hhayi lutho. Kuyinto ithemba engapheli nokholo okungcono.
Nokho, kusukela izibonelo uqhubekele senzo. Ezemfundo ngokuzimisela, njengoba kushiwo ngaphambili - lena eside, kuyinkimbinkimbi futhi isikhathi inqubo oqothulayo. Kodwa kuyakufanelekela it, ngoba lowaya muntu uzophawula ushintsho ngendlela enhle, uma ufunda ukwenza konke kahle. Kufanele wakhumbula ukuthi ukuthuthukiswa yimpumelelo kunoma isiphi isimo akunakwenzeka ukuyeka. Lutho sihlala kuze kube phakade, futhi zonke ohlobene zomuntu, ikakhulukazi. Ukuze uthuthukise futhi ngcono akudingeki kweminyaka embalwa, futhi kukho konke ukuphila kwakhe, kuze kube sekufeni kwakhe. Ngakho, indlela ukuba siqine ngokomoya? Nazi izinyathelo endleleni eya empumelelweni.
Ngokuba ukuthuthukiswa amabutho umoya ayidingi entabeni kwemisipha futhi ikhono ukuba zihlale phansi string, kodwa umsebenzi eyisisekelo kuzokusiza. Imfanelo Physical ngokuvamile kubalulekile kuwo wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi amandla akhe. Kodwa noma ubani ofuna ukuthuthukisa ke Kufanele kwaziwe kodwa ukuthi akusikho nje umphelelisi kodwa ngempela.
Ngokuphelele ukuhanjwa ukuthuthukiswa zamabutho zomoya futhi ifomu ngokomzimba of intaba ekhuphuka, ukubhukuda, ihhashi ogibele noma ezinye kwezemidlalo. Uma ungeke ukwazi ke okungenani yakho - a Ukuvivinya nsuku zonke, ukuzivocavoca, ukugijima. Qala nikwenza. Yebo, kunzima, kodwa isizathu alusho lutho. Njengoba uku uzimisele ukuthuthukisa, usebenza! Kuyadingeka ngawe. Lapha iqala isinyathelo sesibili.
Fundani ukwenza konke ngokusebenzisa "abakwazi". Qala nsuku zonke ukuze avuke aye embhedeni ngesikhathi esithile. Misa ukudla okungenamsoco. Qala ngokwenza umsebenzi. Thola wokuzilibazisa bezijabulisa azosiza ukuze ufunde indlela ukucinga ulwazi lanikwa ibhizinisi ozithandayo ngokuphelele.
Ukuzibamba, ngcono, ngiyeke phansi ukuba esabe futhi nezaba. Wena uyakwazi kakhulu, usukwazi lutho, into esemqoka - ukuba bakholwe ngenhliziyo yonke. By the way, mayelana "wesaba": nephuzu lesithathu uyaphuma.
Ukususa izakhiwo kanye nokwesaba
Lokhu kuyisinyathelo esibalulekile kakhulu. Amandla kuyinto ukungabikho kokwesaba kanye izakhiwo, okuyinto bahlale bengenela nomuntu ukwenza okuthile, futhi ibeke umkhawulo ke. Ungathanda ukwazi ukusinda uyibanga othile emgwaqweni ophithizelayo ngesikhindi sangaphansi yakho? In the ukungabikho izakhiwo, cishe yebo, kodwa uma ikhona, ungahlala esiphuthumayo azinakulondolozeka. Ungathanda ukwazi ukuba siziphonse phansi sisuka esitezi sesibili mgwaqo ukubaleka umbulali? Ukwesaba ungayeka. Nokho, lapha ngesikhathi esifanayo ukuqeqeshwa okuwusizo ngokomzimba, okuyinto okukhulunywe ngaye ekuqaleni. Uma sicabanga izibonelo esibalulekile nokuncane scary: Kungenzeka yini nawe manje uhambe uyobutha emzini ongaziwa? Ayikho? Kungani? Ukungabi bikho kwemali, ukuxhumana kanye nokungakwazi ukuthatha isikhathi sokungabikho emsebenzini - kungcono zonke izaba, eqinisweni uku nje wesaba ukuthi uzoguqula impilo yakho, esabe agqashule ekusebenzelaneni emizini yabo.
Lahla zonke okwesabayo izakhiwo, lokho kuyoholela impumelelo emkhakheni nginenhliziyo. Lokhu kuwusizo hhayi kuphela sokuthuthukisa amandla kwengqondo ngokukhethekile, kodwa futhi ekuphileni, ngoba kungcono ukuba nikhululeke ubandlululo, imicabango yabantu zabantu futhi ezihlukahlukene zokwesaba umuntu kuka shaking njalo hhayi ukukwazi ukwenza okuthile.
Lezi zinyathelo ezintathu kuyoba okwanele sokuthuthukiswa egcwele amandla umoya. Qhubeka futhi ungakhohlwa ukuthi ukhulisa umoya wakho, kalula kulapho lapho uyoba bukhoma.
I lokucuketfwe nekuhlela umsebenzi kwengqondo